Ka eeg Macluumaadka Macaamilka iyo Faahfaahinta Siyaasadda Jaamacadda Hodges
Macluumaadka Macaamiisha Jaamacadda Hodges
Shuruucda ay daabacday Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka si loo hirgeliyo isbeddelada lagu sameeyay Sharciga Tacliinta Sare ee 1965, ee wax laga beddelay (HEA), ee wax ka beddelka Tacliinta Sare ee 1998 waxay u baahan tahay shaacinta kaalmada maaliyadeed iyo macluumaadka hay'adeed ee ardayda ee hoos imanaya barnaamijyada kaalmada maaliyadeed ee ardayda. lagu maamuley iyada oo la raacayo Cinwaanka IV ee Xeerka Tacliinta Sare ee 1965, oo wax laga beddeley. Barnaamijyadan waxaa ka mid ah Barnaamijka Grant Pell Grant iyo William D. Ford Deyn Toos ah oo toos ah. Shuruucda, Jaamacadda Hodges waa inay, sanadle ahaan, u qaybisaa dhammaan ardayda diiwaangashan ogeysiiska helitaanka kaalmada maaliyadeed iyo macluumaadka hay'adeed ee loo baahan yahay in lagu muujiyo iyadoo la raacayo wax ka beddelka HEA iyo iyadoo la raacayo Sharciga Xuquuqda Waxbarashada Qoyska iyo Qarsoodiga (FERPA) ) kaas oo xukuma helitaanka diiwaanada waxbarashada ardayda ee ay hayaan hay'adaha waxbarashada iyo sii deynta macluumaadka diiwaankaas. Macluumaadka macaamiisha ee ardayda hadda iyo kuwa mustaqbalka waxaa laga heli karaa xiriiriyeyaasha hoose. Ardaydu waxay sidoo kale la xiriiri karaan Xafiiska Diiwaan gelinta iyaga oo u diraya emaylka registrar@hodges.edu si aad u codsato nuqul warqad ah soo bandhigiddan ama macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mid ka mid ah mawduucyadan. Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay toos u weydiin karaan weydiimaha gaarka ah ee ku saabsan kaalmada maaliyadeed ee ardayda finaid@hodges.edu.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka dhignay boggayaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Websaydhka dhammaadka boggan tixraaca. Fadlan nala soo xiriir wixii su'aalo ama walaac ah ee aad ka qabto macluumaadkaan.
Ogeysiiska sanadlaha ah ee FERPA
Siyaasadda Xadgudubka Xuquuqda daabacaadda
Kala Duwanaanshaha Jirka Ardayda
Maalinta Dastuurka & Jinsiyadda
Natiijooyinka Ardayda - Navigator Kulliyad
Macluumaadka Buugaagta (Khidmadaha Kheyraadka)
Aqoonsiga, Ansixinta & Ruqsadda
Wareejinta Heshiisyada Daynta & Maqaalka
Caafimaadka & Amniga
Kulliyadda & Shaqaalaha
Siyaasadda Amniga Xarunta (Sharciga Clery)
Lacagaha DARYEELKA - Warbixinta Federaalka
Miisaaniyadda HEERFII Q1 Warbixinta
Miisaaniyadda HEERFII Q2 Warbixinta
Lacagta HEERFIII Warbixinta Q2
Barnaamijyada Kaalmada Dhaqaalaha Ardayda
Dalbashada Gargaarka Ardayda ee Federaalka
Xuquuqda & Waajibaadka Ardayga
Horumarka Tacliinta ee Qanacsan (SAP)
Siyaasadaha Soo Celinta & La Noqoshada
Xeerka Anshaxa Hay'adeed
Ciqaabaha ku xadgudubka Sharciga Daroogada
Siyaasadda Buugaagta & Qalabka loogu talagalay Cinwaanka IV Aid
Qandaraaska Kooxda Saddexaad ee Soo Celinta Cinwaanka IV
Macluumaadka U hogaansanaanta
Siyaasadda Cabashada Ardayga
Nidaamka Gobolka & Wakaaladda
Arday Naafanimo leh
Siyaasadda Qiimeynta & Mashruuca
Bayaanka Takoor la'aanta
Ilaalinta Macluumaadka Ardayda
Macluumaadka Guud ee Hay'adda
Codsiga Qoraalka Rasmiga ah
Waxqabadka iyo Waxqabadka Ardayga
Adeegyada Meelaynta Shaqada & Shaqada
Cinwaanka IX Macluumaadka U hoggaansanaanta
I. Ka warbixi dhacdo
Gargaar Degdeg ah
Haddii aad ku jirto khatar degdeg ah, ama haddii aad aaminsan tahay inay jiri karto khatar joogto ah oo adiga ama dadka kale ee Jaamacadda, fadlan la xiriir Ku Dhaqanka Sharciga adigoo wacaya 911.
Caawimaad raadinta sida ugu dhakhsaha badan waxay muhiim u noqon kartaa xaqiijinta amniga jirka, si loo helo daryeel caafimaad, ama taageero kale. Waxa kale oo laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la ilaaliyo caddaynta, taas oo ka caawin karta fulinta sharciga si wax ku ool ah uga jawaab celinta.
Ka warbixinta Jaamacadda Hodges
The Title Isuduwaha IX waa shaqsiga ay Jaamacadu ugu talagashay inay isku dubarido dadaalkeeda ku aadan u hogaansanaanta waajibaadka Title IX. Dhammaan warbixinnada anshax-xumada galmada waa in lagu hagaajiyaa Isuduwaha Cinwaanka Jaamacadda IX:
Kelly Gallagher, Isuduwaha Cinwaanka IX
4501 Gumeysiga Blvd, Fort Myers, FL 33966
(Tababbarka Iskuduwaha Cinwaanka IX waa la heli karaa halkan.)
Qof kastaa wuu soo sheegi karaa dhacdooyinka anshax xumo galmo ah iyadoon loo eegin haddii kooxda ka warbixineysaa ay tahay qofka lagu eedeeyay inuu dhibane u ahaa anshaxaas.
Marka lagu daro Iskuduwaha Cinwaanka IX, shaqaalaha kale waxaa looga baahan yahay Jaamacaddu inay siiyaan macluumaad ku saabsan anshax xumo galmo Isuduwaha Title IX. Shaqaalahan, ayaa sidoo kale loo yaqaan Shaqaalaha masuulka ah, waa shakhsiyaad ay u magacawday Jaamacadu inay ka jawaabaan magaca jaamacada iyaga oo ku eedeynaya ku xad gudubka shuruucda jaamacada Hodges. Shaqaalaha mas'uulka ah waxaa ka mid ah Madaxweynaha, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta ee Hawlaha Maamulka, iyo Ku-Xigeenka Sare ee Arrimaha Tacliinta.
Shakhsi u soo sheega dhacdo dhacdo shaqaale Jaamacadeed oo aan ahayn Mas'uul Mas'uul Mas'uul ah wuxuu qatar u yahay in macluumaadka aan lagu dhaqmin Jaamacadda. Sidaa darteed, qofka raba inay Jaamacaddu wax ka qabato waxaa si xoog leh loogu dhiirrigelinayaa inuu ku soo wargeliyo dhaqan-xumo galmo mid ka mid ah xafiisyada kor ku xusan.
Warbixinno qarsoodi ah: Qof kasta wuxuu sameyn karaa warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan anshax xumo galmo. Waxay kuxirantahay xadka macluumaadka lagahelayo dhacdada ama shaqsiyaadka ku lugta leh, awooda Jaamacada ee kajawaabida warbixin qarsoodi ah wey xadidnaan kartaa. Isuduwaha Cinwaanka IX ayaa go'aamin doona talaabooyin kasta oo ku habboon oo lagu qaadi karo warbixin aan la garanayn, oo ay ku jiraan daaweynta shaqsiyadeed ama bulshada sida ugu habboon, iyo sidoo kale inuu hubiyo u hoggaansanaanta dhammaan waajibaadka Sharciga Clery.
Fadlan la soco in Dacwada Rasmiga ah aan lagu soo xareyn karin si qarsoodi ah, waxaana kaliya loo tixgeliyaa in la xareeyay oo keliya marka cabashada ay kujirto saxeexa jirka ama dijitaalka ee Dacwad-oogaha, ama haddii kale tilmaamayso in Dacwooduhu yahay qofka xaraysanaya Cabashada Rasmiga ah.
II. Ku saabsan Cinwaanka IX
Cinwaanka IX ee Wax-ka-beddelka Waxbarashada ee 1972 (Title IX) wuxuu bixiyaa, “Ma jiro qof Mareykanka ku nool, jinsi ahaan, looga reebi karo ka-qaybgalka, looma diidi doono faa'iidooyinka, ama laguma takoori doono barnaamij kasta oo waxbarasho. ama waxqabad ku saabsan kaalmada maaliyadeed ee federaalka. ” Iyadoo la raacayo Title IX, Jaamacadda Hodges waxaa ka go'an inay ilaaliso jawi waxbarasho iyo shaqo oo ka madax bannaan takoor sharci darro ah iyo dhibaatayn.
Iyadoo la raacayo cinwaanka IX oo ay tarjuntay Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka, Jaamacadda waxay qaadatay siyaasad mamnuucaya takoorka ku saleysan jinsiga, waxayna siisaa hanaan cabasho rasmi ah si wax looga qabto xadgudubyada. Ujeedadaas awgeed, anshaxa waxaa loo qaadan doonaa inuu ku saleysan yahay jinsiga haddii dhaqanka noocaas ah uu u dhacay sababo la xiriira jinsiga shaqsiga, u janjeedha galmada, aqoonsiga jinsiga iyo xaaladda jinsiyeed.
Cinwaanka IX wuxuu khuseeyaa arday kasta, shaqaale, ama shaqsi kasta oo kale oo ka qayb qaata barnaamij Jaamacadeed ama waxqabad ka dhaca Mareykanka, iyadoon loo eegin jinsiga qofka, nooca galmada, isqorista ama xaaladda shaqo, naafonimo, jinsiyad, diin, ama asal qaran. Dhammaan sheegashooyinka la xiriira dhibaateynta galmada, takoorka jinsiga / jinsiga, rabshadaha galmada, ama anshax xumada waa in lagu xareeyaa iyadoo la raacayo nidaamka Jaamacadda ee cinwaanka IX iyadoon loo eegin ardayga ama xaaladda shaqada.
III. Siyaasadda Ardayga
IV. Kulliyadda iyo Siyaasadda Shaqaalaha
Haddii aad ku jirto khatar degdeg ah, ama haddii aad aaminsan tahay inay jiri karto khatar joogto ah oo adiga ama dadka kale ee Jaamacadda, fadlan la xiriir Fulinta Sharciga by wacaya 911.
Caawimaad raadinta sida ugu dhakhsaha badan waxay noqon kartaa mid muhiim ah si loo hubiyo amniga jirka ama loo helo daryeel caafimaad ama taageero kale. Waxa kale oo laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la ilaaliyo caddaynta, taas oo ka caawin karta fulinta sharciga si wax ku ool ah uga jawaab celinta.
Kheyraadka kale ee deegaanka iyo qaranka waxaa ka mid ah:
Hoyga Haweenka & Carruurta La Xadgudbay, 239.775.1101
Mashruuca Caawinta Naples, 239.649.1404
Gobol iyo Qaran
Khadka Tooska ah ee Rabshada Guryaha ee Florida, 1.800.500.1119
Khadka Tooska ah ee Rabshadaha Qoyska, 1.800.799.7233
Khadka Tooska ah ee Weerarka Galmada, 1.800.656.4673
Xiriirinta boggaga aan la ilaalin ee jaamacadda ama waxyaabaha ku jira ma metelaan oggolaansho Jaamacadda Hodges ama la-hawlgalayaasheeda.
Waad ku mahadsan tahay booqashada websaydhka Hodges. Jaamacadda Hodges waxay raacdaa dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta sida looga baahan yahay Xeerarka Florida, sharciyada Federaalka Mareykanka, iyo Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR). Jaamacadda Hodges waxaa laga heli karaa internetka www.hodges.edu. Waxaan sidoo kale leenahay xerada xerada Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Boggeena wuxuu leeyahay talaabooyin amni oo lagu ilaaliyo luminta, si xun u isticmaalka, iyo / ama wax ka beddelka macluumaadka ku jira gacantayada. Waxaan sameynaa dadaal kasta oo macquul ah si aan u dhigno ilaalin jireed, mid elektiroonig ah, iyo maamul si loo hubiyo macluumaadka aan ka soo aruurino qadka. Si kastaba ha noqotee, siyaasadda asturnaanta websaydhka Hodges looma jeedin in loo qaato ballanqaad qandaraas.
Waxaan ku soo aruurineynaa xog iskood ah oo ku saabsan booqdayaasha degelkeena annaga oo u marinayna xisaab abuur, codsi, iyo foomam xiriir oo lagu soo gudbiyo degelkan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan isticmaalnaa xogta raadraaca bogga si aan u siino khibrada ugu wanaagsan ee isticmaale. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga internetka si aan u toosino oo u habeynno macluumaadka ku saleysan dariiqa aad ku soo gasho goobta. Boggan sidoo kale waxay uruuriyaan macluumaadka taraafikada iyo booqdayaasha sida barta internetka iyo cinwaanka internetka ee kombiyuutarka aad isticmaaleyso adoo adeegsanaya aaladaha gorfaynta webka ee caadiga ah iyo aaladaha raadraaca. Macluumaadka la ururiyey waxaa loogu talagalay oo keliya isticmaalka gudaha si loogu taageero diiwaangelinta ardayda, looga jawaabo weydiimaha websaydhada websaydhka, iyo falanqaynta websaydhka.
Haddii aad wax ka faallooto wax ku saabsan degelkeenna, waxaad si iskood ah u soo gudbineysaa cinwaanka emaylkaaga iyo macluumaad kale. Macluumaadkan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhejiyo faahfaahintaada boggayaga iyadoo la raacayo isticmaalka caadiga ah. Haddii aad jeclaan lahayd in macluumaadkaaga laga saaro, fadlan codso in lagaa saaro adoo email u diraya ad@hodges.edu. Marnaba ma iibin doonno ama haddii kale uma baahin doonno macluumaadkaaga dhinacyada saddexaad. Jaamacadda Hodges waxay u hoggaansameysaa xeerarka khuseeya maxalliga, gobolka, iyo federaalka ee xukuma ururinta iyo keydinta macluumaadka shakhsiyeed. Waad iskaga bixi kartaa astaamaha Xayeysiinta Google Analytics adoo adeegsanaya Google's Ads Settings, Ad Settings ee barnaamijyada moobiilka, ama qaab kasta oo la heli karo Haddii aad jeclaan lahayd inaad joojiso raadinta degelka, fadlan ku hagaaji dejimaha biraawsarkaaga si aad u joojiso raadinta.
Xiriirinta ilaha Internetka ee dibadda, oo ay ku jiraan bogagga internetka, waxaa loo bixiyaa ujeeddooyin macluumaad oo keliya; iyagu kama dhigan karaan oggolaansho ama oggolaansho ay ka heleen Jaamacadda Hodges mid ka mid ah wax soo saarka, adeegyada, ama ra'yiga shirkadda ama hay'adda ama shaqsi kasta. Jaamacadda Hodges wax mas'uuliyad ah kama saareyso saxsanaanta, sharci ahaanta, ama waxyaabaha ku jira bogga bannaanka ama xiriirka ka dambeeya. La xiriir bogga dibedda si aad uga jawaabto su'aalaha la xiriira waxa ku jira.
Dhammaan macluumaadka ku yaal websaydhkeena waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya. Hodges sinaba ugama talineyso adiga adeegsigaada adoo adeegsanaya websaydhkeena. Hodges waxaa loo hayaa dhib la'aan wixii dhibaatooyin ah ee ka dhalan kara iyadoo lagu saleynayo macluumaadka laga helo degelkeenna.
Websaydhkeenna waa la cusbooneysiin karaa wakhti kasta. Barnaamijyadeena shahaadada iyo barnaamijyada kaalmada maaliyadeed waa la waafajin karaa ama la beddeli karaa wakhti kasta iyo iyada oo aan la helin ogeysiis hore.
Guud ahaan, websaydhka Hodges waxaa loogu talo galay inay adeegsadaan dadka waaweyn, haddii aan si gaar ah loogu calaamadin carruurta. Hodges si ogaal la’aan ah kama soo uruuriso Macluumaadka shaqsiyadeed caruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano. Haddii aan ogaanno inaan ka soo ururinay Macluumaadka Shakhsiyeed ee cunug ka yar 13 sano jir oo aan si iskood ah noogu imaan, waxaan ka tirtiri doonaa xogtaas nidaamyadeena.
Dhammaan macluumaadka ku jira degelkan waxaa xaq u leh sida ku xusan Xeerka Xuquuqda Daabacaadda ee 1976. Ma isticmaali kartid wax ka kooban oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn: sawirrada, xogta macallimiinta, ama astaanta adiga oo aan oggolaansho degdeg ah ka helin Jaamacadda Hodges.
Haddii aad tahay shaqsi ka tirsan Midowga Yurub oo aad la macaamisho Hodges marka la eego ogeysiiskaan, GDPR wuxuu bixiyaa xuquuqda soo socota. Si aad u adeegsato mid ka mid ah xuquuqdan, fadlan la xiriir Sarkaalkayaga Ilaalinta Macluumaadka ee Kupton@hodges.edu.
Lagu wargaliyo - aruurinta iyo isticmaalka xogtaada halkaan lagu sharaxay;
Weydiiso helitaanka ama saxda macluumaadka shakhsiga ah ee aan saxda ahayn ee lagaa qabtay;
Codso in macluumaadka shakhsiga ah la tirtiro markii aan loo baahnayn ama haddii la shaqeynayo ay sharci darro tahay;
Ujeedo ka shaqeynta xogta shaqsiyeed ujeedooyin suuq geyn ama ku saleysan xaaladooda gaarka ah;
Codsiga xaddidaadda ka baaraandegidda xogta shakhsiga ah ee kiisaska gaarka ah;
Hesho xogtaada shakhsiyeed ('xog qaadista');
Codsiga in aan lagugu xidhin go'aan ku saleysan kaliya ku shaqeynta otomaatiga ah ee macluumaadka shaqsiyadeed, oo ay ku jiraan muuqaalka.
Xogta shaqsiga ah waxaa laga baaraandegi doonaa oo keliya marka sharcigu oggol yahay inay taasi dhacdo. Xaaladaha qaarkood, Hodges ayaa laga yaabaa inay ku bixiso macluumaad kale oo ku saabsan waxqabadkeeda ku saabsan ogeysiis dheeri ah ama mid gaar ah. Badanaa, macluumaadka shakhsiga ah waxaa ka baaraandegi doona Hodges xaaladaha soo socda:
Meeshaad naga siisay ogolaanshahaaga.
Si loo buuxiyo waajibaadka Hodges ee adiga kaa saarnaa iyada oo qayb ka ah heshiiskaaga shaqada ama isqorista.
Halka Hodges u baahan yahay inuu u hoggaansamo waajibaad sharci ah (tusaale ahaan, ogaanshaha ama ka hortagga dembiyada iyo xeerarka maaliyadeed).
Halka ay lagama maarmaanka u tahay danaha sharciga ah ee Hodges (ama kuwa saddexaad) iyo danahaaga iyo xuquuqdaada aasaasiga ahi kama sarreyso danahaas.
Si loo ilaaliyo danaha muhiimka ah ee mawduuca xogta ama qof kale (tusaale ahaan, xaalad degdeg ah oo caafimaad).
Si loo fuliyo hawl loo qabtay danta guud ama ku dhaqanka awoodda rasmiga ee naloo igmaday.
Maaddaama ay tahay hay'ad Mareykan ah tacliinta sare, ka baaraandegidda ku dhowaad dhammaan macluumaadka shakhsiga ah ee Hodges ayaa ka dhici doonta Mareykanka. Booqdayaasha degelkan waxay qirayaan in xogta shakhsiga ah ee lagu soo ururiyey ama lagu soo ururiyey degelkeeda loo wareejin doono Mareykanka, oo aad sii wadato adeegsiga degelkan, waad oggolaatay wareejintaan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan siyaasadahayaga ku saabsan shuruudahaaga adeegsiga, fadlan nagala soo xiriir cinwaanka emaylka ee ah "add@hodges.edu".